Xaafadaha Seattle: Mount Baker – Taariikh Kooban - HistoryLink.org
Xaafadaha Seattle: Mount Baker – Taariikh Kooban
Bulshadad Mount Baker ee Seattle waxay ku taala Lake Washington koonfurta-bari ee suuqa hoose u dhaxaysa Leschi iyo Lakewood/ xaafadaha Seward Park. Taagan harada ka sarreeyaa, ee leh aragtiyo Cascade Range xagga bariga waqooyiga harada oo dhan Rainier Valley iyo Olympic Mountains-na galbeed ka xigaan, waxa loogu magac daray folkaanaha Cascades-ka Waqooyin kaasoo qudbigiisa 10,788 fiit ah joog ahaan ee barafku qariyey ay ka muuqato waqooyi-bariga fog. Meeshu waxay ahayd mid mar dambe ku soo biirtaykorriinka Seattle, oo ku bilaabantay goob mishiinka alwaaxda markii dadaaladii googoynta alwaaxda loo soo raray koonfur lagana soo raray xaafaddii hore ee u dhawayd suuqa hoose. Mount Baker may soo bixin iyadoo ah bulsho guryo xaafadeed ilaa kadib 1905, markaasoo horumariye J. C. Hunter uu shaqaalaysiiyey shirkadda Olmsted Brothers si uu u nashqadeeyo xaafad beer u eg jid ballaadhan oo xoodan. Hunter wuxuu u qoondeeyey dhul Kooxda Bulshada Mount Baker, taasoo ahayd xarun bulsheed iyo shacab in kabadan qarni. Marka lagu daro deggeneyaasheeda dabaqadda sare, meeshu waxay hooy u ahayd Sicks’ Stadium iyo kooxda baseball-ka Seattle Rainiers sannado badan, ilaa 1850 diina waxay ahayd goob lagu qabto tarkanka diyaaradaha biyaha harada. Inkastoo ay jireen dhacdooyinka ciyaaraha buuqa lihi, Mount Baker waxay sii haysatey sumcaddeedii xaafad daqabada sare ah ahaan oo leh guryo qurux badan iyo muuqaalo layaab elh.